Posted by မေဓာဝီ at 10:19 AM
နတ်သမီးလည်း မနှစ်က မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ခွေးလေးနဲ့ကစားချင်လို့ တရက် အိမ်ခေါ်ထားလိုက်တာ..။
အခန်းကကျဉ်းတော့ ကုတင်ပေါ်မှာသူ့ကိုတင်ထားလိုက်တာ ရှူးတွေပေါက်ချလို့ ....း(
2/03/2011 10:34 AM
ချစ်စရာ အပြစ်ကင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့ ခွေးကလေး
2/03/2011 10:54 AM
ခွေးကလေး အိပ်နေတဲ့ပုံက ချစ်စရား)
စိတ်ပုတီး အမြဲဆောင်ထားတယ်ပေါ့လေ ဒါဆို အပျိုကြီြးုဖစ်မှာတော့ 90 ရာနှုန်းလောက် သေချာနေပြီး ဟိဟိ စတာနော် အစ်မ :P
ဒါမဲ့ ခွေပီးအိပ်နေတာလေးက ချစ်စရာ..
2/03/2011 11:22 AM
အင်း ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီးတော့ ဘာလိုလိုတွေးမိလိုက်သေးတယ်...ဒီကျောင်းကလည်း တစ်မျိုးပါလားလို့...ဒါပေမယ့် ဆက်ဖတ်မှပဲ သဘောပေါက်တော့တယ်...ခွေးကိုချစ်ပေမယ့် အော့အော့ကျုံးရတာကိုတော့ မအီမလည်းကြီးဗျာ...အပြင်ထွက်ရင် ကလေးတွေလို diaper လေးဝတ်ပေးပြီးမှထွက်ခိုင်းတာကောင်းမယ်နော
ဘာကျောင်းကျောင်းပါလေ။ တစ်ခုခုကျောင်းနေဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘ၀ဆို ခပ်ကောင်းကောင်းလေး ကျောင်းပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။
အငြိမ်းစား ခွေးကျောင်းသူကြီး မေ
သံယောဇဉ်က ဘာမှ မကောင်းဘူးဗျ
ခွေးကျောင်းရင် လူဇာတ်လမ်းလေးရော မရှာခဲ့ဘူးလား?း)
ခွေးတစ်ကောင်နဲ့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မမေကို မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်မိတယ်..
ခွေးကျောင်းထွက်တဲ့ နေရာလေးကတော့ နေချင့်စဖွယ်လေးပါနော်..
သာတောင့်သာယာဆိုတော့ စိတ်အေးလက်အေးလမ်းလျှောက်ဖို့ အတော်ကောင်းမဲ့ နေရာလေးဘဲ။
ဒါနဲ့ အဲဒီခွေးလေးကို အပိုင်လိုချင်စိတ်များ မဖြစ်မိဘူးလား ဟိဟိ
ကျနော်နေတဲ့ဖက်က ခွေးမွေးတဲ့ လူတချို့တော့
ခွေးကို အပြင်ထွက် ကျောင်းရင် အညစ်အကြေး
ကျုံးဖို့ ပလပ်စတစ်အိတ်တွေ မဆောင်ကြဘူး၊
မြက်ခင်းပြင်တွေကြား တခါတရံ လူသွားလမ်း
ပေါ်မှာ အညစ်အကြေးတွေ တွေ့ရတတ်တယ်။
ကျနော်တော့ တွေ့တာနဲ့ ပါးစပ်ထဲ ရှိသမျှ
မေတ္တာပို့ပါတယ် ... :P
2/03/2011 2:28 PM
ဒေါ်လေးမေ နားလည်အောင်ရေးရတာ၊ သူက ၃ ပတ် တောင်နေထားတာဆိုတော့ ခုလောက်ဆို တော်တော် ခွေးစကားနားလည်လောက်ပြီ
2/03/2011 2:37 PM
ဟဟ ..မေဓာဝီ ရေ...ကစ်ကစ်ပို့စ် ပါတစ်ခါတည်း ဖတ်လိုက်ပြီ။ ကိုယ် ကလေ အဲလိုရှီးဇူး မျိုးတို့၊ pekingese တို့လိုမျိုးဆိုရင် အရမ်းချစ်တာ...ကြောင်တော့ချစ်ဝူး။
2/03/2011 2:59 PM
2/03/2011 3:00 PM
အော်.. သိသွားပြီ။ မေဓာဝီမှာ Classmate တစ်ယောက်ရှိတယ်ကြားထားတာ လက်စသတ်တော့ ဘကျောက်ဖြစ်နေတာကိုး။ သူတို့တတ်ထားတဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ သူတို့တော့ ဟုတ်နေကျတာဘဲ။ ဟာ ဟ။
မမေ ရေးထားတာလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ ခွေးလေး မာဖီနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ မမေကို မျက်စိထဲ မြင်ယောင်ကြည့်ပြီး ပြုံးမိတယ်။ အရင် ရန်ကုန်မှာ နေတုန်းက တယ်လီယာ အမွှေးဖြူ စုတ်ဖွား ခွေးလေး တစ်ကောင် မွေးဖူးတယ်။ ရို့စ်က ကြောင်ပိုချစ်တယ်။ ကြောင်က ခွေးထက် ပိုသန့်သလားလို့။ ကြောင်လေးတွေက သူတို့ အညစ်အကြေး ကိစ္စ သူတို့ ဘာသာ ရှင်းနိုင်တယ်နော်။
2/03/2011 8:54 PM
2/04/2011 12:06 AM
နိုင်ငံခြားခွေးတွေ အမျိုးသန့်လို့သာပေါ့.... :P.. မဟုတ်ရင် ပါချင်ရာပါ.. ပေါက်ချင်ရာပေါက်ဆို.. ဘယ်လိုလုပ်မလဲမသိ... ဟီးဟီး...
2/04/2011 5:40 AM
သတိရနိင်တဲ့အထဲမှာ အုံတပီး မပါရင်တော့ တော်ပါသေးရဲ့။
ကျနော်တော့ တိရိစ္ဆာန်ဆို အဝေးကပဲ ချစ်တယ်။ ဒဏ်မခံနိင်ဘူး။
မာဖီရေ.. မင်းတော့ ကံကောင်းတာလား ကံဆိုးတာလား မသိဘူး.. ဘလောက်ဂါ မ-မေ လက်ထဲ ခဏ နေရသခိုက်မှာ .. မင်း အတင်းတွေ ဘလောက်ပေါ် လာပြေားနေတယ်ဟေ့... မင်းသိရင် ၀မ်းသာမလား မပျိုကြီး သူများအိအီးပါတာကို အတင်းချတယ်ဆိုပြီး.. ၀မ်းနည်း မလား မသိဘူး..ငါကတော့ မင်းအကြောင်းလေးတွေ ဖတ်ရတော့ ကစ်ကစ်ကိုလဲ သတိရမိပါတယ် မင်းကိုလဲ ကစ်ကစ် အလွမ်းပြေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
2/04/2011 3:06 PM
မှတ်ထားအုန်း။ အပြင်မှာ အီးအီးပါလဲ ကျူံးရတယ်ခင်ဗျ။ ဒီမှာပြောတာပါ။
2/06/2011 8:41 AM
ခွေးတော့ချစ်တယ် ...( ကြောင်ချီးက ပိုနံတယ် မလား ၊ ပျော့ပျော့လေးနဲ့ ဆိုပဲ .)
သူတို့ဆီမှာ ခွေးဖြစ်ရတာတောင် ခွေးအခွင့်အရေး အပြည့်အဝ ရကြတယ် နော် ...
မာဖီကြီး ကြည့်ရတာ ၁၄ ၊၁၅ နှစ်သားလို့ တောင် မထင်ရဘူး .. လှတုံး ပဲ ..
လူကျောင်းသူ ရော...လုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ် ရှိလား ဟင် ။း))
2/09/2011 2:05 AM